Hentitra sy masiaka ireo lehibe Hosaziana avy hatrany ny polisy jiolahy
MPANAO KIDNAPPING MALAZA Tratra niaraka tamin’ny fitaovam-piadiana sy odigasy
Noharatoin’ny zandary any anaty taksibrosy i Zaman’i Fola, ary nosakaina tany anaty kizo fieren-jiolahy kosa ireo zandriny sy tanan-kavanany miisa dimy.
«Hamafisina fa tsy natao ho fialokalofan’ny jiolahy sy ny mpanao ratsy ny asan’ny polisy». Io no tenin’ny Sekretera Jeneralin’ny minisiteran’ny filaminam-bahoaka, ny CGP Herilanto Iangotiana
Rakotondravelo raha namaky teo anatrehan’ny mpanao gazety omaly tolakandro ny fanambaran’ny minisitera mpiahy mikasika ny korontana tany Maroantsetra ny faran’ny herinandro teo ka
nahafatesana olona roa sy naharatrana polisy iray ary nahakila forehitra trano roapolo mahery. Nandritra ny fampitam-baovao teo Anosy no nanasongadinany fa nosoloina polisy vaovao
avokoa ireo tany an-toerana. «Nandray avy hatrany ny fepetra fanesorana ireo rehetra miasa ao Maroantsetra ny minisitera ary nanolo azy ireo amina polisy vaovao. Io fepetra io dia tsy sazy akory fa fandaminana anatiny hitandrovana ny tsy hitaran’ny zava-nitranga», hoy hatrany ny fanambarana nosoniavin’ny minisitry ny filaminam-bahoaka, CGP Roger Rafanomezantsoa. Fanohizana ny
famerenana amin’ny laoniny ny fanajana ny fitsipika eo anivon’ny polisim-pirenena izany. Tsy mbola mijanona amin’izay ny famonoana afo fa ho valin’ny fepetra sy fampanantenan’ny vahoaka an-
toerana izay hampitony ny hatezerany dia tsy maintsy hitohy ny famotorana. Ny minisitra mpiandraikitra mihitsy no nangataka teo anatrehan’ireo mponina, hialana amin’ny kitranoantrano
mba ny fitsarana no hitarika ny fanadihadiana. Midika izany fa tsy nafindra toerana fotsiny ireo mpitandro filaminana voakasik’ity raharaha ity fa efa misokatra ny famotorana azy ireo. Mitaky
fahalalahana ho an’ny manampahefana hanatanteraka ny fanadihadiana ny minisitra. Maro mantsy no manahy amin’ny mety ho fisian’ny tsindry ka hahavery an-javony ny raharaha toy izao, noho ny endrika tsindry maro ka tsy handray ny saziny
ireo heverina fa jiolahy sy mpanao ratsy mialokaloka amin’ny asan’ny polisim-pirenena. Azo lazaina fa marefo ny rafitra fitandroana ny filaminana matoa resy tosiky ny herim-bahoaka hatrany izy ireo. Ireo
mponina nahavita heloka tahaka ny doro trano fonenana maro toy izao ihany koa mitaky lalàna matotra mahafehy azy ireo mba hitaran’ny toe-tsaina. Raha ny tantara no todihina dia efa misy
karazan’atidoha mitroka ny fandorana sy ny fanapotehana toy izao
hatramin’ny fandorana ny lapan’ny tanàna fehizay izany.
Nampiaka-peo fa handray fepetra ireo lohandohan’ny mpisorona eo anivon’ny polisim-pirenena
manoloana ireo mihoa-pefy mialokaloka eo amin’ny asan’ny polisy.